Ny olona tsy afaka manao ny tenany ho marina.
Raha ny Baiboly milaza fa ny olona dia hamarinina, dia midika izany fa avy amin'Andriamanitra izy ambara ho marina, izy dia afaka madiodio amin'ny fahotany amin'ny alalan'ny fitsarana latsaka amin'ny 'i Jesoa Kristy. Izay manamarina Andriamanitra mihitsy.
Ny foto-kevitra ny fanamarinana sy ny fahamarinana tanteraka ve no foto-kevitra fototry ny finoana kristianina. Ny teny soedoà manamarina ao amin'ny fandikan-tenin'ny Baiboly dia nadika avy amin'ny teny grika tany am-boalohany, "dikaíoo", ny teny dia Endriky ny matoanteny amin'ny fomba ara-dalàna fa hanambara olona tsy manan-tsiny. Ny olona dia afaka madiodio amin'ny heloka no izy. Azonao atao ny mampitaha ny hevitra hoe raha misy mpitsara na ny mpitsara tao amin'ny fitsarana manazava ny sasany amin'ireo "tsy meloka".
Ny olona tsy afaka manao ny tenany ho marina. Paoly manoratra ao amin'ny 2 Korintianina 5:18, 19
"Ny zavatra rehetra dia avy amin'Andriamanitra, Izay nampihavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay ny fanompoana fampihavanana. Fa Andriamanitra ao amin'i Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy. Izy, fa tsy nanisa ny olona ny fahotana, ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana. "
"Samy efa nanota ny rehetra ka tsy manana ny voninahitr'Andriamanitra, ary hamarinina maimaimpoana fa nahazo izany tamin'ny fahasoavany, satria i Kristy Jesosy efa nanavotra azy ireo." Romanina 3:23, 24
Iray vokatry ny fanamarinana amin 'ny finoana izany dia ny manana fifandraisana amin'Andriamanitra am-pilaminana.
"Koa satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika, dia manana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika." Romana 5: 1
Izany ihany ny fahasoavana izay tonga ao momba fanamarinana
"Fa hatrizay fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona, ​​fa amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy, dia nino an'i Kristy Jesosy, mba hohamarinina amin'ny finoana an'i Kristy, fa tsy amin'ny alalan'ny fitandremana ny lalàna. Fa ny asan'ny lalàna tsy misy olona hohamarinina. "Galatiana 2:16
Io fanamarinana Mazava sy mitombina noho ny fahafatesan'i Jesosy ho sorona, na izany aza, tokony ho nandray noho ny finoana ny olona mba hanompo ny famonjena / fanamarinana ho azy.
Tsy misy toy izany no tsy isan-Automatic-famonjena. Mariho tsara izany dia zava-dehibe!
Ao amin'ny 2 Korintiana 5:20, 21 dia ny hoe: "Noho izany dia iraka solon'i Kristy. Izany dia Andriamanitra manao ny antso amin'ny alalan'ny antsika. Angataho ary izahay noho ny an'i Kristy , dia mihavàna amin'Andriamanitra. Izay tsy nahalala ota, Andriamanitra dia eo amin 'ny toerana efa nataony ota, fa Izy no mety ho tonga ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. "
Na dia ao amin'ny Testamenta Taloha, dia hitantsika ny fanamarinana amin 'ny finoana. Samy ao amin'ny 1 Eksodosy 15: 6, Romana 4: 3 sy Galatiana 3: 6 dia milaza momba ny Abrama (= Abrahama) ny fomba nino an'Andriamanitra, ka ahoana no dia nisaina ho fahamarinany izany. Ao amin'ny Rom 3:21, 22, i Paoly dia milaza fa ankehitriny dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra no naseho, satria ny lalàna sy ny mpaminany manambara, dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino. Hitantsika ao amin'ireo andininy ireo ny fomba na ny lalàna sy ny mpaminany teo aloha efa naminavina ny fanamarinana amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Milaza amintsika ny Baiboly mikasika ny fomba tsy dia hohamarinina amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy, fa koa mikasika ny fomba ny tenany lasa ny fahamarinana! Jeremia 23: 6 Ary Jeremia 33:16 miresaka ny JEHOVAH FAHAMARINANTSIKA. Nilaza i Paoly ao amin'ny 1 Korintianina 1:30
"Manana ny fisaorana ho anareo izay anareo ho ao amin'i Kristy Jesosy, Izay dia efa nataon'Andriamanitra ho antsika fahendrena, fahamarinana, fahamasinana ary fanavotana"
Toy izany koa ny fahamarinana 'i Jesoa Kristy, ilay zava-dehibe ireo izay mino Azy, izay mahatonga ny Ray hoy antsika olo-marina. Rehefa mamaky Ary tamin'ny tolana roa, momba an'i Jesosy Kristy, ilay hany fanantenana, ka tsy Andriamanitra hamorona olona tahaka ny amin'ny lurch fony izy mbola tao amin'ny saha Edena nanota taminy, ka nisafidy ny handeha tamin'ny lalana manokana. Efa namaky momba ny drafitry ny famonjena, naniraka ny Zanany malala, i Jesosy, mba ho azo tanterahina ho an'ny olona mba manana fifandraisana am-pilaminana miorina aminy. Raha tsy ho an'i Jesosy Kristy sy ny sorona fitsanganana amin'ny maty (Romana 4: 23-25), noho izany dia efa maty rehetra amin'ny fahotantsika, ny nahafatesan'i Jesosy miresaka momba ao amin'ny Jaona 8:24.
Mba hamaranana ity lahatsoratra ity amin'ny hetra io fitoriana ny Tompo sy ny Mpamonjy Jesosy Kristy.
"Na dia izy no endrika 'Andriamanitra, dia tsy mba nieritreritra ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa tahaka ny valin'asa homeny dia nanolotra ny tenany amin'ny alalan'ny nanangana ny mpanompo dia tonga olombelona. Dia hita ao amin'ny tarehiny dia tahaka ny olona nanetry tena ka nanaiky ho faty - na dia ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Koa izany no nanandratan'Andriamanitra Azy indrindra sy nanomezany Azy ny anarana ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no handohalehan'ny lohalika rehetra, any an-danitra sy etỳ an-tany sy any ambanin'ny tany, ary ny lela tsirairay hiaiky Andriamanitra Ray voninahitra fa i Jesoa Kristy dia ny Tompo. "Filipiana 2: 6-11.